Nin magaalada Burco ku dilay Haweeney ay wada socdeen iyo faahfaahin laga helay - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Nin magaalada Burco ku dilay Haweeney ay wada socdeen iyo faahfaahin laga helay - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Warar kala duwan ayaa kasoo baxaya qaabka dilkeedu u dhacay, waxayna dadka degaanku sheegeen inuu madaxa ugu garaacay derbiga, kadibna ay isku duntay qeyb ka mida madaxa intii ay dagaalamayeen.
Ehelka haweeneyda ayaa sheegay in la kufsaday marxuuma Ugbaad, kadibna ninka falka geystay uu isagu sadhigga is-geeyay oo u sheegay dilka uu geystay, sidaana lagu xiray, waxaana baaritaan ku socdaa kiiskan.
Previous articleRa’iisal wasaaraha oo kormeeray Isbitaallo ku yaalla Muqdisho iyo Wadooyinka oo saacado u xirnaa (Sawirro)